Telo volana voalohany Tena mafy ho an’ireo sekoly tsy miankina ny niatrika azy
Nifarana omaly zoma 21 desambra ny telo volana voalohany amin’ity taom-pianarana 2018-2019 ity.
Tena mafy no niatrehan’ireo sekoly tsy miankina izany raha araka ny fanadihadiana natao. Diso lava loatra mantsy; hoy i Solonandriana Lanto, talen’ny lisea La prime etsy Anosibe ny taom-pianarana 2017-2018, hany ka mbola tena kamo ireo ankizy mpianatra. Ireo ankizy tao amin’ny taona fahadimy sy ny fahasivy ary ny famaranana ihany izay hiatrika ny fanadinam-panjakana vokatr’izany no nikofoka tamin’ny fianarana ho azy ireo fa ny ankoatra izay dia noterena mafy fotsiny, eny fa na dia nanao devoara aza. Nisy tamin’ireo zavatra tsy vitan’izy ireo tamin’ity telo volana voalohany ity no tsy maintsy tohizana amin’ny telo volana faharoa arahin’ny famitana ny fandaharam-pianarana rehetra mialoha ny hiatrehana ny famerenana amin’ny telo volana fahatelo. Nambaran’ity talen-tsekoly iray ity fa tsara ihany ny vokatra na izany aza. Niezaka hatrany mantsy izy sy ireo mpampianatra eo ambany fiadidiany nanao izay ho afany nampahery sy nampirisika ny ankizy ka tratra ihany ny tanjona. Ankoatra ny fizarana bileta izay natrehin’ireo ray aman-drenin’ny mpianatra omaly dia efa nosokafana tamin’ny lanonana nokarakarain’ny mpianatra ny fialan-tsasatry ny fetin’ny Noely sy ny alatsinainy sy ny talata lasa teo ka nisy ny fifaninanana hatsaran-tarehy ho an’ny tovovavy sy ny tovolahy, ny fanaovana face painting.